साथीहरूसँग घडी 17
किन कहिलेकाहीं येशू मानिसजातिको स्वर्गीय मध्ये एक हुनुहुन्छ र ती पुरातनताका मानिसहरू पनि आफ्नो सवार थिए, बरु उहाँले सबै क्रिश्चेंडर द्वारा आयोजित संसारको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर भन्नु भएको थियो?
कथन धेरै कारणहरूले गर्दा हो। कसै-कसैले बयान दिन्छन् किनकि उनीहरूले अरूले बनाएको सुनेका छन्; कसै-कसैलाई, जो प्राचीन समयको इतिहाससँग परिचित थिए, किनकि पुरातन व्यक्तिको इतिहासले उनीहरूका धेरै मुक्तिदाताहरू थिए भन्ने तथ्यलाई रेकर्ड गर्दछ। विभिन्न मानिसका उद्धारकर्ताहरू तिनीहरू आउने मानिसहरूका आवश्यकताहरू अनुसार फरक छन्, र तिनीहरूको विशेष चीजबाट जसबाट तिनीहरू मुक्ति पाउनुपर्दछ। यसैले एक जना मुक्तिदाताले मानिसहरूलाई महामारी, अनिकाल वा शत्रु वा ज wild्गली जनावरको आक्रमणबाट जोगाउँथे। अर्को उद्धारकर्ता मानिसहरु लाई मुक्त गर्न को लागी देखा पर्‍यो जुन मानिस तिनीहरुसंग क्रूरताबाट आएका थिए उनीहरूलाई भाषा, कला र विज्ञान सिकाउन सभ्यता को लागी, वा आफ्नो दिमाग र समझ को प्रबुद्ध गर्न। जसले संसारको केही धार्मिक प्रणालीहरू पढेका छन, त्यसले स्पष्ट देख्न सक्दछ कि मुक्तिदाताहरू येशू जन्मनुभएको मिति भन्दा सयौं वर्ष वा हजारौं वर्ष अगाडि देखा पर्दछन्।
यदि येशू सबै ईसाई जगतले संसारलाई उद्धारकर्ता भनेर कहलाइनुहुन्छ भने त्यस्तो घोषणा सबै ईसाई जगतको अज्ञानता र अहंकारको अभिव्यक्ति हो, तर भाग्यवस ईसाईजगत्तिको लागि यो त्यस्तो छैन। पछिल्ला बर्षहरूमा विशेष गरी पश्चिमी विश्व इतिहास र अन्य व्यक्तिको धर्मशास्त्रसँग परिचित हुँदै गएको छ र अन्य जातिका मानिसहरु र उनीहरुको विश्वासलाई बढी मित्रवत भावना र राम्रो स fellow्गति देखाउँदै छ। पश्चिमी संसारले पुरानो व्यक्तिको साहित्यिक खजानामा रहेको बुद्धिको भण्डारलाई महत्त्व दिन सिकेको छ। विगतका अनगिन्ती व्यक्तिहरूबाट मुक्ति पाउन परमेश्वरद्वारा चुनिएका केही व्यक्तिहरूको पुरानो भावना हराइसकेको छ र यसको ठाउँमा न्याय र सबैको अधिकारको मान्यता आउँदैछ।
क्या तपाईं हामिलाई बताउनुहुन्छ कि यदि डिसेम्बर को बीस -वास्तव दिन वरिपरि वा वरदानको जन्म मनाउने कुनै व्यक्ति हो (सूर्यलाई साइन मक्रेटर्न प्रवेश गर्ने बेलामा?
डिसेम्बरको बीसौं दिन इजिप्टमा ठूलो रमाहटको समय थियो, र होरसको जन्मदिनको सम्मानमा एउटा उत्सव आयोजना गरियो। चीनको पवित्र पुस्तकहरूमा तोकिएको संस्कार र समारोहमध्ये अन्य पुरानो धर्महरूको चाड पनि राम्ररी पछ्याइन्छ। डिसेम्बर मा अन्तिम हप्ताको दौरान, जाडो अक्रान्त को समयमा, पसल र अदालत बन्द छ। धार्मिक गम्भीरताहरू त्यसपछि मनाइन्छ र टाई टिएनलाई कृतज्ञताको चाडहरू भनिन्छ। फारसी मिथ्रास मध्यस्थ वा मुक्तिदाता भनिन्थ्यो। तिनीहरूले उनको जन्मदिन डिसेम्बरको पच्चीसौं ठूलो रमाइलोको बीचमा मनाए। यो मान्यता थियो कि त्यस समयमा सूर्य स्थिर छ र त्यसपछि दक्षिणमा उसको लामो यात्रा पछि उत्तरतर्फ फर्कन थाल्छ, र भनिन्छ कि चालीस दिन धन्यवाद र बलिदानको लागि छुट्याइएको थियो। रोमीहरूले डिसेम्बरको पच्चीसौं बाचेसको सम्मानमा ठूलो उत्सवका साथ मनाए, जुन त्यस समयमा सूर्य जाडोको घोलबाट आफ्नो फर्कने क्रममा थियो। पछि, जब रोममा धेरै फारसी समारोहहरू ल्याइयो, उही दिन सूर्यको आत्मा मिथ्रासको सम्मानमा एउटा चाडको रूपमा मानिन्थ्यो। हिन्दुहरुको लगातार छवटा चाडहरु छन। डिसेम्बरको पच्चीसौं दिनमा मानिसहरूले आफ्नो घरलाई माला र गिल्ट कागजले सजाउँछन् र विश्वव्यापी रूपमा साथीहरू र आफन्तहरूलाई उपहार दिन्छन्। यसैले यो देख्न सकिन्छ कि यस तिथिमा प्राचीन कालका मानिसहरू रमाइलोको रूपमा पूजा गरे। यो जाडो अक्रान्त को समयमा थियो कि मात्र दुर्घटना वा संयोग हुन सक्दैन। यो मान्नु कत्ति बढी उचित छ कि विगतका सबै स्पष्ट संयोगहरूमा, त्यहाँ गहिरा रहस्यमय महत्वको अन्तर्निहित सत्य छ।
यो भनिएको छ कि ख्रीष्टको जन्म एक आध्यात्मिक जन्म हो। यदि यो हो भने, किन खानेकुरा र पिउने गरी शारीरिक शरीरको लागि क्रिसमस मनाइएको छ, भौतिक तवरमा, जो आध्यात्मिकताको हाम्रो धारणाको धेरै विपरीत हो?
यसको कारण शुरुका शताब्दीका इसाईहरूको हो। मूर्तिपूजक र अन्यजातिको विश्वासका साथ उनीहरूको शिक्षा वर्गलाई वर्गबद्ध गर्ने प्रयासमा, तिनीहरूले आफ्ना चाडपर्वहरूलाई तिनीहरूका आफ्नै पात्रोमा समाहित गरे। यसले दोहोरो उद्देश्यको जवाफ दियो: यसले ती व्यक्तिहरूको चलनलाई सन्तुष्ट तुल्यायो र उनीहरूलाई लाग्यो कि नयाँ विश्वासको लागि समय पवित्र हुनुपर्दछ। तर चाडपर्वहरू र चाडपर्वहरूलाई अपनाउँदै आत्मा उत्प्रेरित भयो जुन उत्तरका मानिसहरु, ड्रुइड र रोमीहरुका बीचबाट मात्र सुरक्षित राखिएको थियो। जंगली origs मा लिप्त थियो र पूर्ण इजाजतपत्र अनुमति थियो; त्यस समयमा घिचुवापन र मतवालापन व्याप्त थियो। प्रारम्भिक मानिसहरूसँग, उनीहरूको आनन्दको कारण सूर्यको आफ्नो स्पष्ट मार्गमा सब भन्दा कम बिन्दु पार गरेको मान्यता हो र डिसेम्बरको पच्चीसौंदेखि उनले आफ्नो यात्रा सुरु गरे जुन वसन्तको फिर्ताको कारण हुनेछ र तिनीहरूलाई बचाउनेछ। जाडोको चिसो र उजाडबाट। क्रिसमसको मौसममा प्रायः सबै हाम्रो अवलोकणहरूको उत्पत्ति प्राचीनहरूको साथ भयो।
In भोल्यूमको 'मित्रहरूसँगको क्षणहरू'। 4, पृष्ठ 189, भनिन्छ क्रिसमसको अर्थ 'प्रकाशको अदृश्य सूर्यको जन्म, क्रिष्ट प्रिन्सिपल' हो जुन यो जारी रहेको छ, 'मानिसभित्र जन्मनुपर्दछ।' यदि यो हो भने, के यसले येशूको शारीरिक जन्म पनि डिसेम्बरको पच्चीसौं दिनमा भएको थियो?
होइन, यो पछ्याउँदैन। वास्तवमा यो माथि भनिएको छ “मित्रहरूसँगको क्षणहरू” माथि उल्लेखित छ कि येशू शारीरिक शरीर हुनुहुन्न। कि यो शारीरिक बाट एक अलग शरीर हो - यद्यपि यो शारीरिक माध्यमबाट र जन्मबाट आएको हो। यस जन्मको तरीका त्यहाँ छ र येशू र ख्रीष्टको बीचमा भिन्नता रहेको छ। येशू अमरत्वको बीमा गर्ने शरीर हुनुहुन्छ। वास्तवमा, येशू वा अमर शरीर उहाँको लागि जन्म नभएसम्म कुनै पनि व्यक्तिद्वारा अमरत्व प्राप्त हुँदैन। यो, यो अमर शरीर हो, येशू वा जुन नामले यो प्राचीन कालखण्डलाई थाहा थियो, जुन मानिसका मुक्तिदाता हो र यसको जन्म नभएसम्म उहाँ मृत्युबाट बचाइनुभयो। आज पनि त्यस्तै कानूनले राम्रो धारण गर्छ। जो मर्दछ ऊ अमर हुँदैन, नत्र ऊ मर्न सक्दैन। तर जो अमर बनेको छ, ऊ मर्न सक्दैन, अन्यथा उहाँ अमर हुनुहुन्न। त्यसकारण मानिस मृत्यु हुनु अघि अमरत्व प्राप्त गर्नुपर्दछ, वा अन्यथा पुनर्जन्म गर्न जारी राख्नुपर्दछ, जबसम्म कि उहाँ आफ्नो अमर शरीर येशूद्वारा मृत्युबाट मुक्ति पाउनु हुँदैन। तर येशू शरीर जस्तो हुनुहुन्न। हाम्रोलागि र हाम्रोलागि, ख्रीष्ट एक सिद्धान्त हुनुहुन्छ, कुनै व्यक्ति वा शरीर होइन। तसर्थ भनिएको छ कि भित्रै ख्रीष्टको जन्म हुनुपर्दछ। यसको अर्थ हो, जो अमर हुँदैनन्, उनीहरूको दिमाग ख्रीष्टको सिद्धान्तको उपस्थितिबाट उज्यालो हुन्छ र उनीहरूले सत्यको कुरा बुझ्न सक्दछन्।
यदि येशू वा ख्रीष्ट जीवित हुनुहुन्नथ्यो र उहाँ गर्नुभएझैं सिकाउनुहुन्न भने, यस्तो त्रुटि यति धेरै शताब्दीहरूसम्म रहन सक्थ्यो र आजसम्म पनि हुनुपर्दछ?
त्रुटिहरू र अज्ञानता तबसम्म प्रबल हुन्छ जबसम्म उनीहरू ज्ञान द्वारा प्रतिस्थापित हुँदैनन्; ज्ञानको साथ, अज्ञानता हराउँछ। त्यहाँ दुबै को लागी ठाउँ छैन। ज्ञानको अभावमा, यो भौतिक वा आध्यात्मिक ज्ञान हो, हामीले ती तथ्यहरूलाई स्वीकार्नुपर्दछ। तथ्यहरू फरक हुन चाहनाले उनीहरूलाई जोटमा परिवर्तन हुँदैन। येशू वा ख्रीष्टको जन्मको बारेमा इतिहासमा कुनै तथ्यहरू छैनन्। येशू र ख्रीष्ट भन्ने शव्दहरू प्रतिष्ठित जन्म हुनुभन्दा शताब्दीयौं अघि अस्तित्वमा थिए। ऊ जन्मिएको थियो भनिएको छ त्यस समयमा हामीसंग त्यस्तो अस्तित्वको कुनै रेकर्ड छैन। त्यो व्यक्ति जो बाँचेको थियो - र जसले एक महत्वपूर्ण चरित्रको रूपमा यस्तो गडबडी र मान्यता ल्याएको थियो - त्यो समयका इतिहासकारहरूले बेवास्ता गर्नुपर्दछ। भनिन्छ, राजा हेरोदले “सानो बच्चा” बाँच्न नपाउन थुप्रै शिशुहरूलाई मारेका थिए। भनिन्छ, पिलातसले येशूलाई सजाय दिएका थिए र येशू क्रूसमा टाँगिएपछि उहाँ बौरेर उठ्नुभएको हो भनिन्छ। यी कुनै पनि असाधारण घटनाहरू त्यस समयका इतिहासकारहरूले रेकर्ड गरेका छैनन्। हामीसँग मात्र रेकर्ड छ जुन सुसमाचारको पुस्तकमा निहित छ। यी तथ्यहरूको अनुहारमा हामी प्रतिष्ठित जन्मलाई प्रमाणित गर्न सक्दैनौं। सबै भन्दा राम्रो गर्न सकिन्छ कि यो संसारको मिथक र पौराणिक कथा बीच एक ठाउँ दिन छ। येशूको मृत्यु र मृत्युको बारेमा हामीले आफ्नो त्रुटिमा निरन्तरता पाउनु अनौठो होइन। यो हाम्रो साथ प्रचलन र बानीको कुरा हो। दोष, यदि त्यहाँ गल्ती छ भने, ती शुरुवाती चर्चका बुबाहरूमा निहित छ जसले येशूको जन्म र मृत्युको तर्कलाई स्थापित गरेका थिए।
के तपाईं भन्नु भएको छ कि ईसाई धर्मको इतिहास कुनै पनि योग्यता होइन, ख्रीष्टको जीवन एक मिथक हो, र यो लगभग 2,000 वर्षको लागि दुनिया एक मिथकमा विश्वास गरिरहेको छ?
विश्वले लगभग 2,000 बर्षदेखि इसाईमतमा विश्वास गरेको छैन। आज संसारले इसाईमतमा विश्वास गर्दैन। इसाईहरू आफैले येशूका शिक्षाहरूमा उनीहरूको सयौं भाग बाँच्न पर्याप्त विश्वास गर्दैनन्। इसाईहरू लगायत विश्वका अन्य मानिसहरूले पनि येशूको शिक्षालाई तिनीहरूको जीवन र कामको विरोध गर्दछन्। इसाईहरूले कुनै पनि शिक्षालाई पूर्ण रूपमा पालन गर्दैनन्। तथ्य र दन्त्यकथा बीचको भिन्नतालाई हामीले उल्लेख गरेका छौँ कि येशूको ऐतिहासिक जन्म र जीवनको बारेमा कुनै तथ्यहरू छैनन्। कथित र मिथकलाई धेरै इसाईहरूले अन्यजातिहरूको धर्मको आधारमा राख्छन्, तर इसाई विश्वास एकै वर्गमा छ। वास्तवमा भन्ने हो भने, इसाई धर्मको वास्तवमा संसारका धेरै ठूला धर्महरू भन्दा कम आधारहरू छन्। यसको मतलब यो होइन कि इसाईमत झूटा हो, न त सबै धर्महरू झूटा हो। त्यहाँ एउटा पुरानो भनाइ छ कि प्रत्येक मिथ्याहरूमा त्यहाँ लोगोहरू हुन्छन्। एक मिथक एक गहन सत्य सहित एक कथा हो। यो इसाईमतको कुरा हो। शुरुको इतिहासमा र हाम्रो समयमा येशूको जीवन र बचाउने शक्तिमा विश्वास गरेर धेरैले लाभान्वित भएका तथ्यहरू केहि गोप्य शक्ति हुनुपर्दछ; यसमा यसको शक्ति छ। कुनै पनि महान शिक्षक वा शिक्षण को उपस्थिति एक निश्चित कानून, चक्र को कानून, वा ofतु को नियम अनुसार छ। येशूको प्रतिष्ठित जन्मको समय एक नयाँ प्रकट सत्यको प्रचार र विकासको लागि चक्र वा मौसम थियो। हामी विश्वास गर्छौं कि त्यस बेला त्यहाँ अमरत्वको लागि पुग्ने मानिसहरू मध्ये एक थियो, येशू शरीरको जन्म पहिल्यै नै उल्लेख गरिएको छ, कि यति प्राप्त गरेपछि, उनले ती प्राप्त गर्न र बुझ्ने क्षमता पाएकाहरूलाई अमरत्वको शिक्षा दिए। उहाँको वरिपरि धेरै मानिसहरू भेला भए। यसको कुनै इतिहास छैन कि उहाँ अमर जीवनको रहस्यको बारेमा अपरिचित व्यक्तिहरूलाई चिन्नुहुन्नको कारण हो। केही समयको लागि आफ्ना चेलाहरूलाई बाँच्न र सिकाउन, त्यसपछि उहाँ छोडेर जानुभयो र उहाँका शिक्षाहरू चेलाहरूले प्रचार गरे। ख्रीष्ट र उसको शिक्षामा अटल रहनुको कारण यो हो कि मानिसभित्र उसको अमरत्वको सम्भावनाको अन्तर्निहित विश्वास छ। यस अव्यक्त विश्वासले ती शिक्षाहरूमा अभिव्यक्ति फेला पारे जुन चर्चले तिनीहरूको वर्तमान रूपमा विकृत पारे।